Ukuhombisa abaThengisi beMayile yeWayile kunye neFektri- abaVelisi abaThintela ukuhanjiswa kweentambo e China
I-Fly chain link link inika zombini iziphumo ezilungileyo zokuhlobisa kunye nezisombululo ezithile zokukhusela. Iscreen sokubhabha isikhuselo sinokuthintela izinambuzane, kwangaxeshanye, sinesiphumo esihle somoya oya kukubonelela umoya omtsha kunye nokusingqongileyo okucocekileyo. Ukongeza, ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo ukudibana nesitayile sokwakha.
Ngenxa yolu ncedo, ikhonkco lokubhabha ikhonkco libonisa indawo yokuhlala, iihotele, iivenkile zokutyela, iivenkile, iivenkile, iihotele, ii-handrails, iivenkile, iivenkile ezinkulu, iiholide, iindawo zokubonisa, igumbi lokubonisa, ikhitshi, iofisi, iindawo zokuthenga kunye nezinye iindawo. .
I-1.Ring mesh yenziwa ngentsimbi ye-304, 316, 316 L, ubhedu, isinyithi, njl njl. Imessage yeringi inokwenziwa kuyo nayiphi na imilo ngokwemfuno zabathengi, ezinje ngesikwere, isangqa, trapezoid, unxantathu, njl. Ukuchazwa okuqhelekileyo kwemessage yokukhala kwe-mesh Ayikho i-Wire Dige ubukhulu (mm) Ubungakanani bezinto ezingafunekiyo (mm) Izinto ezingalunganga (kg / sq) 1 0,8 7 zintsalela 3 2 1 8 zisi-stainless 4.2 3 1 10 zine stainless 3.3 4 1.2 10 ezingenabala. 4.6 ...
Ukuhombisa nge-wire mesh kubandakanya i-iron coil drapery, i-ring mesh, ikhonkco lokudibanisa kwikhonkco. Ukusuka ekukhetheni kwezinto eziluhlaza, ukuluka, ukutshixa, kunye nokunyanga ngomphezulu kwezinye iinkqubo, yenza i-wire mesh yokuhombisa inemibala eqaqambileyo kunye nembonakalo entle.
I-1.Metal coil drapery ikwabizwa ngokuba yintsimbi yekhethini yentsimbi, i-Metal coil drapery, ilaphu lesinyithi elenziwe ngesinyithi okanye umhlobiso wentambo yokuhombisa ye-mesh kwimarike yethu yendawo. Yindlela yokuhonjiswa yentsimbi yanamhlanje kunye neendlela ezintsha zokuguquguquka kunye nokubengezela kocingo lwentsimbi. Ngenxa yoyilo lwayo eyahlukileyo kunye nokuqina, Metil coil drapery ayisiyonto iqhelekileyo kodwa ngumhombiso ophezulu. Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo, i-Metal coil drapery inokuzisa ingcinga engapheliyo kunye nesibhengezo esihle sobuhle phantsi kwesibonakaliso ...